बिकास र पुर्बाधार – Nepal Online Khabar
कान्ति लोकपथ अ'लपत्र पर्नुका चार कारण । १. सरकारको बेवास्ता : कान्ति लो'कपथ अ'लपत्र पर्नुमा सरकारको बेवास्ता मुख्य कारण हो । सेनाले ०१३ मा ट्रयाक खोल्न सुरु गरेर ०१६ मा सक्यो । तर, त्यसपछि लोकपथ निर्माण कार्य सरकारको प्रा'थमिकतामा नै परेन । ०५९ मा आएर मात्रै लो'कपथलाई हेटौँडा जोड्ने वै'कल्पिक मार्गका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बहस सुरु भयो । लगत्तै कोरियन सरकारको सहयोगमा सडकको डिपिआर तयार गरियो । तर, काम अघि बढेन । ०६५ मा लो'कपथ निर्माण पुनः बहसमा आयो । ५.५ मिटर चौडाइ रहने भनिएको सडक ८.५ मिटर चौडा बनाउने तय गरियो, तर बजेट विनियोजन गरिएन । लोक'पथलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको आर्थिक वर्ष ०७०/७१ बाट मात्रै हो । त्यसयता तीन अर्ब ३६ करोड विनियोजन भइसकेको छ । तर, दुई अर्ब ५८ करोड मात्रै खर्च भएको छ । लोकपथको ८० प्रतिशत भौतिक प्रगति यही अ'वधिको भएको आयोजनाले जनाएको छ । २. फास्ट ट्र'याक प
Aug122020 by Nepal KhabarNo Comments
एक अर्बको लगानीमा कागज उद्योग सञ्चालनमा, १ सय ५० जना स्थानीयलाई रोजगारी दिइने…हेर्नुहोस् ।
भरतपुर : पश्चिम सुस्ताको नवलपुरस्थित आ'रुङ्गखोलामा एक अर्ब रुपैयाँको लगानीमा कागज उद्योग सञ्चा'लनमा आएको छ । उद्योग निर्मा'णको २ वर्षपछि अहिले प'रीक्षण उत्पादन गर्न सुरु गरिसकेको उद्योगका प्रबन्ध निर्देशक राजन पियाले जान'कारी दिए । उद्योगले नेपाली बजारबाट निस्किएका का'गजजन्य फो'हरबाट पुनः प्रशोधन गरी प्या'केजिङ उत्पादन गर्ने उनको भनाइ छ । दैनिक १ सय २० टन कागज उत्पा'दन गर्ने गरी उद्योगले उत्पादनको काम सुरु गरेको हो । जसको लागि १ सय १० टन का'गजजन्य फो'हर संकलन गर्ने गरेको छ । नेपालमा ३ वटा कागज उद्योग रहेपनि तेस्रो मुलुकबाट ७० प्रति'शतभन्दा बढी कागज आ'यत गर्ने गरिएको बुधबार भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलनमा'र्फत जान'कारी गराइएको छ । नवलपुरमा रहेको भृकृटी कागज उद्योग एक दशकदेखि बन्द रहेपनि तत्कालीन अवस्थामा कागज उत्पादन गर्ने जिल्लाको रुपमा परिचित थियो । नवलपरासीको पहिचान फेरि स्थापित गर्न
Jul252020 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौं : पर्यटन व्यवसायीले विद्युत् महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्न उर्जामन्त्रीसँग माग गरेका छन् । को'भिड–१९ पर्यटन व्यवसाय वि'पद् समन्वय समितिले शुक्रबार साँझ ऊ'र्जा, जलस्रोत तथा सिँ'चाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर पर्यटन व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा पनि डि'माण्ड शुल्कबवापत ठूलो रकम विद्युत् प्राधि'रणलाई तिनुपर्दा व्यवसायी मारमा परेको भन्दै सो शुल्क मिनाह गर्न माग गरेका हुन् । विप'द् समन्वय समितिका संयोजक एवं ठमेल पर्यटन विकास परिष'द्का उपाध्यक्ष भविश्वर शर्मा ढुङ्गानाले बन्दाब'न्दीका कारण ठमेलका व्यवसाय बन्द रहेको अवस्थामा विद्युत् युनिट उठेको आधारमा बन्दाबन्दी शुरु भएको मितिदेखि कम्तीमा दुई वर्षसम्म ५० प्रतिशत छुट दिन मन्त्रीसमक्ष आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो । भेटमा ठमेल पर्यटन वि'कास परिषद्, ट्रेकिङ एजे'न्सिज एशेसिएशन अफ नेपाल (टान)नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्राभल एजेन्टस (न
Jul12020 by Nepal KhabarNo Comments
काठमाडौँ : काठमाडौँ महानगरपालिकाले वडा–३२ को तीनकुनेमा अत्याधुनिक बुद्धपार्क निर्माण गर्ने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रमै बुद्धपार्क निर्माण गर्ने योजना समावेश गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाले पार्क निर्माणको कामलाई द्रु’त गतिमा अघि ब’ढाउने जानकारी दिएको छ । ‘तत्कालिन नेपाल सरकारले २०३२ साल जेठ १४ मा जग्गाप्राप्ति ऐन अनुसार तीनकुनेको जग्गा अ’धिग्रह गरेदेखि नै तीनकुनेमा पार्क बनाउने योजना बनेको हो । तर, अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन,’ काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले भने, ‘तीनकुनेस्थित खाली जग्गाको मु’आब्जा वि’वाद सुल्झाउन नसक्दा यो योजना अ’लपत्र परेको छ । यस पटक सबै विवादको अन्त्य गरेर योजना अघि बढाउने तयारीका साथ हामी अघि बढेका छौँ ।’प्रमुख शाक्यले तीनकुनेको मु’आब्जा वि’वाद सुल्झाउन काठमाडौँ महानगरपपालिकाले प्रा’रम्भिक अधिकारी नै तोकेको र प्रतिवेदन
Jun252020 by Nepal KhabarNo Comments
बजेट सकाउन असारे विकासको चटारो
Posted in ताजा समाचार, बिकास र पुर्बाधार
कालिकोट : जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा बजेट सिध्याउनकै लागि असारमा धमाधम विकास निर्माणका काम भइरहेका छन् । गत वर्षसम्म जसरी असारको महिनामा विकास निर्माणका काम गरिन्थ्यो । यस वर्ष पनि कोरोनाको महामारीका कारण तीन महिना लगातार लकडाउन भएपछि गत वर्षको तुलनामा दोब्बर विकास निर्माणका योजनाको काम असारमै हुन थालेको स्थानीय नागरिकले बताएका छन् । जिल्लाको रास्कोट नगरपालिका वडा नं. ५ स्थित आरसीपी बजार बृहत खानेपानी योजनाको जेठको अन्तिममा सम्झौता भयो । असारबाट धमाधम काम भइरहेको छ । उपभोक्ता समितिले पुरानै पाइप लाइनमा पुरानै पाइप दबाएर निर्माण सुरु गरेको उक्त आयोजना स्थानीयको विरोधपछि पाइप खरिद गरिएको छ । आरसीपी बजार बृहत खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष गंगबहादुर शाहीले भने, 'कर्णाली प्रदेश सरकारबाट आएको ५५ लाख बजेटको जेठ १४ गते उपभोक्ता समिति गठन भयो । उपभोक्ता समिति गठन भएपछि विवादका कारण असार